I-Rfid Key Fobs Suppliers kunye neFektri | I-China Rfid Key Fobs Abavelisi
I-RFID S70 MIFARE Classic 4K iifobs eziphambili
Ukusetyenziswa Njengoko i-NFC Keyfob yethu eyaziwayo yenziwa ngezinto ezingangeni manzi kwaye igcina amaqondo obushushu aphakathi kwe -25 ° C kunye no-70 ° C, ilungele ukusetyenziswa kwangaphandle. Umzekelo unokusetyenziselwa ukulawula ukufikelela kwiindawo zokwakha okanye ukurekhoda amaxesha okusebenza kwabasebenzi bangaphandle. I-chipset yale keyfob isebenza kakuhle nazo zonke ii-smartphones ze-NFC ezinikwe amandla. Izicelo Le yimizekelo embalwa yezicelo ezinokubakho zeqhosha lesitshixo. Lawula ukufikelela ngaphakathi nangaphandle-Rekhoda iwor ...
125KHz wazifihla isuntswana Tag RFID Key 26
Ithegi ephambili yeRFID ABS ngoku iyathandwa linani labantu njengoko benobunzima bokukhanya kwaye bayaphatheka ukuzisa kuyo yonke indawo. Iya isiba yinto yefashoni kwezi ntsuku kwaye yenza ubomi bethu bube lula ngakumbi. Njengoko itekhnoloji ihamba ngesantya se-rocket kwaye akukho nto ishiywe ingafakwanga kunye nenkqubela phambili kwezobuchwephesha oko kuthetha ukuba iRFID ABS Keychain Igama lomba # 2 RFID ABS KEYCHAIN ​​Chip EM4200 / TK4100EM4305 / T5577 / F08 / MFS50 / S70 / N-TAG213 / 215 / 216, njl njl.
I-125KHz em4305 RFID I-Tag ephambili yoLawulo lokuFikelela
I-RFID ABS Keychain ngoku iyathandwa linani labantu njengoko benobunzima bokukhanya kwaye bayaphatheka ukuzisa kuyo yonke indawo. Iya isiba yinto yefashoni kwezi ntsuku kwaye yenza ubomi bethu bube lula ngakumbi. Njengoko itekhnoloji ihamba ngesantya se-rocket kwaye akukho nto ishiywe ingafakwanga kunye nenkqubela phambili kwezobuchwephesha oko kuthetha ukuba iRFID ABS Keychain Igama lomba # 2 RFID ABS KEYCHAIN ​​Chip EM4200 / TK4100EM4305 / T5577 / F08 / MFS50 / S70 / N-TAG213 / 215 / 216, njl njl.
I-125KHz T5577 RFID Keyfob Key Tag yoLawulo lokuFikelela
I-RFID ABS Keychain ngoku iyathandwa linani labantu njengoko benobunzima bokukhanya kwaye bayaphatheka ukuzisa kuyo yonke indawo. Iya isiba yinto yefashoni kwezi ntsuku kwaye yenza ubomi bethu bube lula ngakumbi. Njengoko itekhnoloji ihamba ngesantya se-rocket kwaye akukho nto ishiywe ingafakwanga kunye nenkqubela phambili kwezobuchwephesha oko kuthetha ukuba iRFID ABS Keychain Igama lomba # 2 RFID ABS KEYCHAIN ​​Chip EM4100 / TK4100 / T5577 / F08 / MFS50 / S70 / N-TAG213 / 215 / 216, njl njl.
RFID Abs kufutshane Tag Key
I-keyfob ye-ABS inzima kwaye yomelele ngenkangeleko entle, i-chip inokufakwa ngaphakathi kweqokobhe le-ABS. Isikrini sesilika, ilogo iyafumaneka ngaphezulu. Ungenziwa ngemfuneko ngokungqinelana abathengi. I-RFID ye-tag yokusondela kwethegi yesitshixo isetyenziswa ngokubanzi kulawulo lolawulo lofikelelo, njl. Njl. ngokuchaseneyo, 20 opp / ibhokisi ...
RFID kufutshane Fob
Proximity key fob is a kind of shaped card that chip and coil packed in ABS shell, is can with iintlobo zeendlela ezahlukeneyo okanye iimilo. Isilika screen eprintiweyo, nokukrola iyafumaneka. Nxiba ukumelana, fade ukumelana. Kukho iifomathi ezahlukeneyo zeRFID chip (LF / HF / UHF) enokhetho lomntu kunye nokhetho lokufaka ikhowudi. Ngumfanekiso olungileyo weshishini kunye nenqanaba lomntu. Imifanekiso yemveliso ye-5 # RFID ukusondela kwefob Ukucaciswa: Igama lomba: I-RFID yesitshixo sefob yesayizi: 36 * 25 * 6.0 ...